ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဖော်ထုတ်ရေး စမည် | ဧရာဝတီ
သာလွန်ဇောင်းထက်| February 8, 2013 | Hits:15,003
| | ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားရေးသားသည့် “ဥပဒေ အထက်မှာ လွှတ်တော် ရှိနေသလား” ဆောင်းပါး
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ယနေ့ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားဖော်ထုတ်ရေး ကော်မရှင်က ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား မည်သူ မည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို တာဝန်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကော်မရှင်တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်သူ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ပြောသည်။
ယနေ့ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် “ဥပဒေအထက်မှာ လွှတ်တော်ရှိနေသလား” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လွှတ်တော်ကို ဝေဖန်ရေးသားခဲ့သော ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကို ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် ကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယင်းကော်မရှင်တွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၇ ဦးပါဝင်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်က ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများထံ တာဝန်ပေးရမည်ဟု ကော်မရှင်၏ တာဝန်များတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း သိရှိရသည်။
“ကော်မရှင်မှာ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ အများကြီးပါတဲ့အထဲက ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဘယ်သူဆိုတာကို ဖော်ထုတ်ဖို့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကို တာဝန်ပေးရမယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။ အဲဒီတော့ ကော်မရှင်က လိုက်ရှာမှာမဟုတ်ဘူး။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကို တာဝန်ပေးလိုက်မှာ။ တရားဝင် အစည်းအဝေး ခေါ်ပြီးတော့ တာဝန်ပေးမှာပေါ့။ အခုက ကော်မရှင်က စဖွဲ့ကာစပဲ ရှိသေးတယ်” ဟု ဦးဖုန်းမြင့်အောင်ကဆိုသည်။
လွှတ်တော်က အတည်ပြုဖွဲ့စည်းထားသော ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကော်မရှင်၏ တာဝန်များတွင် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား၏ ရေးသားချက်ကြောင့် ပြည်သူလူထုက အထင်လွဲစေမှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ လွှတ်တော်များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေသည်ကို ပြည်သူလူထုကို အသိပေးရန်၊ အင်တာနက်၊ အီးမေးလ်နှင့် ဖက်စ်များမှတဆင့် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများသည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် မည်သို့ ငြိစွန်းသနည်းဆိုသော အချက်ကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ရှိသကဲ့သို့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား၏ ရေးသားမှုသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာ အေးချမ်း သာယာရေး ထိခိုက်စေသော ကိစ္စများကို စိစစ်ရန်၊ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားဆိုသော ကာယကံရှင်အား မည်သို့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည့် အကြံဥာဏ်များနှင့် အစီအစဉ်များကို ဖော်ထုတ် အကြံပြုရန်တို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်၊ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီးလည်းဖြစ်သူ ဦးရဲထွဋ်ကမူ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားသည် မိမိဟု စွပ်စွဲမှုများရှိကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့်သော်လည်း ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ပေးရန် စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိကြောင်း ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
“ကော်မရှင်က တာဝန်ပေးလာရင် ကော်မရှင်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲ ရှိတာပေါ့။ သူတို့က ဘာတာဝန်ပေးမလဲဆိုတာ အခုထက်ထိ ကျနော်တို့ကို ပြောတာမရှိသေးပါဘူး။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပြောတာလည်း မရှိသေးဘူး။ တာဝန်ပေးလာရင်တော့ တာဝန်ပေးတဲ့အတိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့။ ကျနော်တို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ကျနော်အနေနဲ့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဘယ်သူလဲဆိုတာကို စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ ပိုပြီး ကူညီချင်ပါတယ်။ ဒါမှလဲ တကယ်လို့ လူအမှန်ပေါ်ပေါက်လာမှပဲ ကျနော့်ကို တိုက်ရိုက်(သို့မဟုတ်) သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ၀န်ကြီးဌာနကိုသော်လည်းကောင်း စွပ်စွဲနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့စကားကို သူတို့ ဘယ်လောက်တာဝန်ယူ သလဲဆိုတာ ကြည့်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဦးရဲထွဋ်က ဆိုသည်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား၏ “ဥပဒေအထက်မှာ လွှတ်တော်ရှိနေသလား” ဆောင်းပါးတွင် သမ္မတဦးသိန်စိန်းနှင့် လွှတ်တော်အကြား တင်းမာမှုဖြစ်ခဲ့ရသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးကိစ္စကို ဝေဖန်ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုဆောင်းပါးတွင် ခုံရုံးကိစ္စ လွှတ်တော်က အတည်ပြုထားသည်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် သမ္မတက သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့မှုအပေါ် လွှတ်တော်က ပယ်ချအတည်ပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ဝေဖန်ထားကာ သမ္မတ၏ သဘောထား မှတ်ချက်ကို ပယ်ချလိုက်ခြင်းသည် လွှတ်တော်အနေနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို မလေးစားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ “အခြေခံဥပဒေက မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် အပေါင်းပါများက လွှတ်တော်တွင်း မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်သည်” ဟူသော အချက်ကို ထောက်ပြရေးသားထားသည်။
ဘလော့ဂါနေဘုန်းလတ်ကမူ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း နည်းပညာဖြင့် ဖော်ထုတ်ရန် မလွယ်ကူကြောင်း၊ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သိရှိထားသူများမှတဆင့် ဖော်ထုတ်ရန်သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“နည်းပညာအရ လိုက်ဖို့မလွယ်ဘူး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သိနေရင်တော့ မသိဘူးလေ။ နည်းပညာအရ အဲလောက် မလွယ်ဘူး။ ဘလော့မှာ ရေးတဲ့ အတွက် Google တို့ ဘာတို့နဲ့ ချိတ်ဆက်နေတယ်။ ဒီဘက်မှာလည်း အဲလောက်လိုက်နိုင်တဲ့ စွမ်းအား မရှိဘူး ထင်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သိတာဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ဘယ်လို စုံစမ်းမလဲ မသိဘူး။ ကော်မရှင်တွေ ဘာတွေဖွဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဆိုတော့ ဘယ်လို လုပ်မလဲ သေချာမသိဘူး။ ဘယ်လို ဥပဒေနဲ့ အရေးယူမယ်ဆိုတာ မသိပေမယ့် အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေ ရှိနေသေးတယ်။ အီလက်ထရောနစ်နဲ့ပဲ အရေးယူမယ်ဆိုရင် အဲဒီဥပဒေက ပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီဥပဒေနဲ့ပဲ ထောင်ချခံခဲ့ရတာ။ အဲဒီဥပဒေကို မကြိုက်ဘူး” ဟု ကိုနေဘုန်းလတ်က ရှင်းပြသည်။
ဒေါက်တာဆ်ိတ်ဖွားကော်မရှင်တွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးမြညိမ်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာက ဆောင်ရွက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းဆွေက အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဒေါက်တာစိုးရင်၊ ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုး၊ ဦးဖုန်းမြင့်အောင်၊ ဦးအောင်ဆန်း၊ ဦးအောင်ငြိမ်း၊ ဦးခိုင်မောင်ရီ၊ ဦးကံညွှန့်၊ ဦးသိန်းညွန့်၊ ဦးစိုင်းကျော်ဇောသန်း၊ ဦးအုန်းကြိုင်၊ ဦးလှထွေး၊ ဦးသိန်းဦး၊ ဦးဆန်းလွင်၊ ဒေါ်ကျင်စန်း စုစုပေါင်း ၁၇ ဦးပါဝင်သည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ရာဇာ February 8, 2013 - 6:12 pm	အင်တာနက် ပေါ်မှာ စာလေးတစောင် ရေးတာ လွှတ်တော်က ကော်မရှင်ဖွဲ့ ပြီးစုံစမ်းရတယ်လို့ ဗျာ…..လွှတ်တော်မှာ ဒီထက်အရေးကြီး တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ဘို့မရှိတော့ဘူးလား မသိဘူး…ဒီမိုကရေစီ ခေတ်မှာ ကြိုက်တာရေးကြ ပေါ့..အစိုးရဘက်ကသာ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ် နေရင် ဒါတွေကို အရေးစိုက်စရာ မလိုပါဘူး…လွှတ်တော်ကလဲ ပြောလဲပြောချင် စရာပါဘဲ…တိုင်းပြည်ကောင်းရာ ကောင်းကြောင်း ပြုလုပ်ရမဲ့ မူဝါဒတွေ ချမှတ်ရမဲ့ အစား…ဆိတ်ဖွါးကိစ္စကတမျိုး…တနပ်စားကိစ္စကတဖုံ….ကျည်ဆန်တွေပေးမဲ့ကိစ္စကတနည်း…ဖုံးကြဲပစ်လိုက်ဆိုတာကတလမ်း….ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီးနေလို့ပြောတာကအဆုံး တရုံးရုံး နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေမှ တော့ လွှတ်တော်ဆိုတာ ဇွတ်အော်နေလို့ ချွတ်ချော်ကုန်ပြီ လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ.
Reply	ဌေးဝင်း February 8, 2013 - 6:23 pm	ရှာမနေပါနဲ့…ကျွှန်တော်ပါဘဲ။ဘယ်နေ့…..ဘယ်အချိန်…..လာ၇မလဲသာပြောပါ။လာကြိုကြနော်…TAXI ဘိုးမရှိလို့။
Reply	Wut yee February 8, 2013 - 6:57 pm	ကော်မရှင်တွေ ဘာတွေဖွဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဆိုတော့ အလုပ်မရှိကြဘူးထင်တယ်။
Reply	komoe February 8, 2013 - 7:07 pm	ဉီးမင်းသိင်္ခသိမယ်မေးကြည့်ပါလား
Reply	aung February 8, 2013 - 7:39 pm	လွှတ်တော်ကို ကန့်ကွက်သည်။ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ရေးသားခွင့် ရှိသည်။
Reply	tuntunwinsan February 17, 2013 - 12:36 am	လွှတ်တော်ကို ကန့်ကွက်သည်။ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ရေးသားခွင့် ရှိသည်။
Reply	Moe Myint Kyaw February 8, 2013 - 8:07 pm	“လွှတ်တော်များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေသည်ကို ပြည်သူလူထုကို အသိပေးရန်” ဆိုတာကို သဘောကျ တယ်။ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဆိုတဲ့လူ ပြောနေတာတွေ ဟုတ်/မဟုတ် သိချင်လို့ပါ။ သူ ပြောနေတာတွေ ကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အကိုးအကားတွေနဲ့နော်။ ပြီးတော့ သူပြောသလို လွှတ်တော်ထဲမှာ တကယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလား?
Reply	Sai Linyone February 9, 2013 - 1:37 am	Trying to bully freedom of expression or freedom of press will not be the job of the Hlutdaws but protect and defend. Criticism must be welcomed no matter positive or negative by branches of Burmese government. It will be considered as Checks and Balances too in the society. Wasting time to fight this author means just nonsense.
Reply	thihamin February 10, 2013 - 11:30 am	တခြားသူဟုတ်ရိုးလား ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးတဖြစ်လဲ မောင်*****ပါဘဲဗျာ။ မြန်မာ့သားကောင်း Wet Sideကလည်းသူတို့တတွေကြံရာပါ ပါဘဲဗျာ။ အခုတော့ တရုပ်ပြည်မှာလို လူစားထိုးဘို့
Reply	Okkar February 11, 2013 - 4:58 pm	This Doctor is the man. All Hlutdaw members Vs. Dr. Seyt Phwa. Well done, Doctor.